HCDDED: “Maro ireo very amin’ny demokrasia” - ewa.mg
HCDDED: “Maro ireo very amin’ny demokrasia”
News - HCDDED: “Maro ireo very amin’ny demokrasia”
ireo very amin’ny demokraisa: manaotao fahatany ny sasany, manompa
olona, manao tsikera tsy araka ny tokony hanaovana azy… Manana ny
lalàna fototra ny demokrasia: fanajana ny zo fototra sy iainantsika
eto Madagasikra. Eo ny fahazoana miteny sy maneho hevitra, mivory,
mivavaka…”, hoy ny filohan’ny Filankevitra ambony miaro ny
demokrasia sy ny fanjakana tan-dalàna (HCDDED), i Pierre Lenoble
Navony. Tafiditra amin’ny fankalazana ny Andro iraisam-pirenena ho
an’ny demokrasia, omaly izany. Mifandray akaiky izany. Tsy misy ny
demokrasia, raha tsy misy ny fanajana ny fanjakana tan-dalàna.
Miantoka ny fampandrosoana ny demokrasia.
Nefa tsy tanteraka ny fahalalahana
mivory amin’izao fotoana izao noho ny hamehana ara-pahasalamana. ny
valanaretina fa tsy hoe fihibohana na fahamehana amin’izao fotsiny,
araka ny andraisan’ny sasany azy. “Aoka isika samy hanaja
tsara ny lalàna izay voasoratra”, hoy izy.
L’article HCDDED: “Maro ireo very amin’ny demokrasia” a été récupéré chez Newsmada.
Fier-mada 2019: tosika ho an’ny fambolena sy ny fiompiana
Atao eny amin’ny kianja Maki Andohatapenaka, ny foara Fier-Mada, andiany faha-21, nanomboka omaly ary hifarana amin’ny alahady 11 aogositra. Fotoana entina hanohanana ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono. Miisa 450 ny tranoheva, ahitana ny seha-pihariana samihafa, toy ny famokarana, ny fanodinam-bokatra, ny fitaovam- pamokarana, ny zezika sy ny masomboly ary ny fanafody, ny sehatra ara-bola (mikraofinansa sy banky), sns.Nanokatra ity hetsika, omaly, ity ny filoha Rajoelina, nanehoany fa vonona hiara-kiasa sy hanohana ny tantsaha sy ny mpamokatra ny fanjakana. Efa misy ny ezaka ataon’ny fanjakana hampiroboroboana ny sehatry ny fambolena, toy ny fanamorana ny dingana atao amin’ny lafiny fananan-tany, hampirisika ny tantsaha hanitatra ny velaran-tany hajariany. Eo koa ny fandaharanasa Fihariana, manohana ny mpandraharaha hahita famatsiam-bola sy fiofanana ho matihanina.Manampy ireo, efa voasoratra ao anatin’ny Tetibolam-panjakana nohavaozina (LFR 2019), ny fanorenana sy ny fanavaozana ny fotodrafitrasa, toy ny lalana ohatra, hanamorana ny fitaterana ny vokatra. Tafiditra ao anatin’izany ny fanarenana ny lalam-pirenena faha-44, mankany Ambatondrazaka, sompitr’i Madagasikara.Manohana kaoperativa 15 ny AmbatovyMandray anjara amin’ity Fier-Mada 2019 ity koa ireo kaoperativa tantsaha miisa 15, tohanan’ny orinasa Tetikasa Ambatovy. Avy any amin’ny faritra Alaotra Mangoro sy Atsinanana izy ireo, avy any amin’ny tanàna na kaominina andalovan’ny fantsombe miainga any Ambatovy Moramanga hatrany Toamasina. Anisan’ny tohana nomen’Ambatovy azy ireo, ny fampiofanana momba ny fambolena sy fiompiana, ny famatsiana masomboly, ny fanorona fikarohana lalam-barotra, sns. Nilaza Rtoa Sarah Minah, sekretera jeneraly ny kaoperativa Felamamy, fa “mahavelombolo ny vokatra, izahay tantsaha indray no tsy maharaka ny lalam-barotra”. Tsy maharaka ny filan’ny tsena ny vokatra, toy ny kanelina, ny garana, sns.Sajo sy Njaka A. Nanamarika ny filoha Rajoelina fa tsy nahafa-po azy ny fikarakarana, ny fanomanana, ny toerana, ka hanampy ny fikarakarana ny andiany faha-22 izy. Hatao amin’ny toerana tsara kokoa, hatao maimaimpoana ny dokambarotra any amin’ny haino aman-jerim-panjakana, mba ho fantatra manerana ny Nosy.L’article Fier-mada 2019: tosika ho an’ny fambolena sy ny fiompiana a été récupéré chez Newsmada.
Trano lehibe misy efitra 31 ka ny 21 amin’ireo, birao fiasana miampy efitra lehibe iray fanaovana fivoriana, efitra fitanana olona, misy an’ny tsy ampy taona sy ny ampy taona. Izany ny trano vaovao fiasan’ny Fitaleavam-paritry ny filaminana anatiny eo anivon’ny faritra Vakinankaratra izay notokanana, omaly. Fotodrafitrasa mitentim-bidy 1 049 000 000 Ar. To­nga nitokana izany tamin’ny fo­mba ofisialy ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina. «Zava-dehibe ny fijoroan’ny fotodrafitrasa toy izao satria mendrika ny hiasa amin’ny trano manara-penitra toy izao ny mpitandro fi­la­minana, indrindra mendrika ho­raisina amin’ny birao tsara ny vahoaka manan-draharaha atao», hoy ny Filoha Rajoelina. Nambaran’ny minisitry ny Fi­laminam-bahoaka, ny contrôleur général de police Randri­a­na­ri­son Fanomezantsoa fa mipetraka eo amin’ny tantaran’ny polisim-pirenena ny datin’andro an­droany (omaly io) satria tao anatin’izay 59 taona nijoroan’ny polisim-pirenena malagasy izay, tsy mbola nisy fananganana fo­todrafitrasa manara-penitra toy izao.Jean ClaudeL’article DRSP Vakinankaratra : mitetim-bidy 1 049 000 000 Ar ilay birao vaovaon’ny polisy a été récupéré chez Newsmada.
Anjanahary II O: mirefy 460 m ny fantson-drano voasolo
Mitohy ny asa fanoloana ny fantsona tranainy sy manary rano eny amin’ny fokontany Anjanahary II O. Manatanteraka izany ny Jirama sy ny orinasa afrikanina tatsimo TRG International. Mirefy 460 metatra ny fantsona efa voasolo, nanomboka ny 25 aogositra 2020 teo. Miisa 67 ny fitarihan-drano efa nafindra amin’ireo fantsona vaovao ireo.Hifarana amin’ny 19 septambra ny asa eny Anjanahary II O, izay miteraka fikorontanan’ny famatsian-drano.Tsiahivina fa mirefy 90 km ny fantson-drano hosoloina eto Antananarivo Renivohitra ka ny 10 km no tafiditra ao anatin’izao dingana voalohany izao. Efa vita ny teny Ilanivato, Androndrakely ary Soavimasoandro.Efa mandeha kosa ny fanohizan’ny Jirama ny fanamboarana ny tobin-drano eny Amoronakona, hiantoka ny famatsian-drano any amin’ny tapany atsinanan’Antananarivo. Miandry ny anjarany kosa ny ny faritr’Itaosy, anisan’ny tena mijaly rano. Njaka A.L’article Anjanahary II O: mirefy 460 m ny fantson-drano voasolo a été récupéré chez Newsmada.
Fifidianana ben’ny tanàna :: Mety tsy ho tanteraka amin’ny 28 oktobra indray ny latsa-bato
Miandry ny sitrapon’ ny governemanta. Tsy mbola nivoaka tamin’ny Filankevitry ny minisitra natao, omaly, teny Iavoloha ny didim- panjakana tokony hiantso ny mpifidy handatsa-bato amin’ny fifidianana ben’ ny tanàna, novinavinain’ ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana (Ceni) hotanterahana amin’ny 28 oktobra 2019. Farafahatarany anefa dia amin’ny alahady 28 jolay izao no hamoahana an’io didim-panjakana io raha toa ka hotazonin’ny gover – nemanta ilay vinavinana tetiandro natolotry ny Ceni. Toa tsy rototra sady tsy maika ary azo heverina fa mety tsy mihevitra ny hankatò an’io tetiandro io ny rafitra mpanatanteraka, hatreto. Ny governemanta no tompon’ny fanapahan-kevitra farany amin’ny fankatoavana ny tetiandrom-pifidianana sy ny daty tokony hanatonto – sa na azy. « Ho hita eo ihany izay hanaovana azy . Izay ihany no azo ambara », hoy fotsiny ny loharanom- baovao iray ao governemanta, omaly. Tsy mbola fantatra ihany koa raha toa ka hatao aoriana kelin’io daty io, na mety ho amin’ity taona ity ihany, na mety ho amin’ny taona ho avy mihitsy ny fifidianana ben’ny tanàna. L’article Fifidianana ben’ny tanàna :: Mety tsy ho tanteraka amin’ny 28 oktobra indray ny latsa-bato est apparu en premier sur AoRaha.
“70 mahery ny antontan-taratasin’ady efa vonona hotsaraina momba ireo ady heloka bevava ireo. Hiezaka izahay ho voatsara avokoa ireo raharaha nentina eto amin’ny Pac.”Izay ny fanambaran’ny tonia mpampanoa lalàna ambony eo anivon’ny fitsarana misahana ny raharahana kolikoly (Pac), Antananarivo, Razafindrakoto Solofohery, teny 67 ha, afakomaly, momba ireo raharaha ady heloka bevava voarain’io rafi-pitsarana io hatramin’izao ary kendrena hovitaina amin’ity taona ity.Andiana fitsarana valo ny hataon’ny Pac amin’izay fitsarana ady heloka bevava izay.Nanomboka ny fiandohan’ny herinandro, ny 19 aogositra, hatramin’ny 27 aogositra ny andiany voalohany: miisa 13 nyantontan-taratadin’ady tsaraina amin’izany, misy voampanga 38. Manomboka amin’ny volana septambra kosa ny andiany roa. Toy izay koa amin’ny oktobra izay misy andiany roa, ary ny novambra sy ny desambra, misy andiany roa avy.Maro ireo karazana heloka bevava hitsarainaAnisan’ny tsaraina amin’izany ny raharaha fanodinkodinam-bolam-panjakana, ny famotsiam-bola, ny fanaovana kolikoly, ny fanaovana hosoka sy ny fampiasana hosoka, ny fanondranana zava-mahadomelina, ny fanondranana olona, ny fanamparam-pahefana, ny fisandohana andraikitra… Mety hahatafiditra am-ponja dimy ka hatramin’ny 20 taona sazy an-terivozona ireo heloka bevava ireo, miampy tsy fahazoana mandia faritra mandritra ny dimy taona.Tsy misy sazy mihantona na fanalefahan-tsazy ny didy avoakan’ny Pac. Na izany aza, misy fiarovana avy amin’ny fanjakana an’ireo voampanga. Nahatratra aoriana ny fanombohan’ny fiasan’ny Pac hatramin’izay ny fifidianana ireo mpitsara mpanampy.R.Nd.L’article Ady amin’ny kolikoly : hotsarain’ny Pac amin’ity taona ity ireo raharaha 70 mahery a été récupéré chez Newsmada.